ဟာသ Archives - POPPIN NEW
နေရာမှားပြီး လိင်ဆက်ဆံနေတာကြောင့် ကလေးမရ ဖြစ်နေတဲ့ လင်မယားကို လမ်းကြောင်းပြန်တည့်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်
Pop Pin New August 1, 2019
နေရာမှားပြီး လိင်ဆက်ဆံနေတာကြောင့် ကလေးမရ ဖြစ်နေတဲ့ လင်မယားကို လမ်းကြောင်းပြန်တည့်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံက လင်မယားစုံတွဲတစ်တွဲဟာတော့ ခုမျက်မှောက် ခေတ်ကြီးမှာ ရှားမှရှား လှထုံလင်မယားလို့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက် လေးနှစ်လုံးမှာ လိင်ဆက်ဆံနေပေမယ့် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေခဲ့ရတယ် ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ အသက် ၂၆ နှစ် အမျိုးသားနဲ့ အသက် ၂၄ နှစ် အမျိုးသမီး ဒီလင်မယားစုံတွဲဟာ …
အချစ်ကြမ်းလွန်းတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ရင်သားတွေ ပြုတ်ထွက်သည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေး
Pop Pin New July 23, 2019
အချစ်ကြမ်းလွန်းတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေး အချစ်ကြမ်းလွန်းတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ရင်သားတွေ ပြုတ်ထွက်သည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ရ ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ဒေသခံ တီဗွီ အစီအစဉ် တစ်ခုမှာ သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူမဟာ အခုအခါမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ရင်သား ပိုကြီးအောင် အစားထိုး ခွဲစိတ်မှု ခံယူခဲ့သူ …
ရဲစခန်းကိုမှ ဘဏ်အထင်နဲ့ ဓါးပြတိုက်မိတဲ့သူရဲ့အဖြစ်(ရုပ်သံ)
Pop Pin New July 22, 2019
စာဖတ်သူပရိသတ်များခင်ဗျာ… ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ဗီဒီယိုလေးကတော့ ငိုအားထက် ရယ်အားသန် အဖြစ်မျိုးရုပ်သံဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်….. အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဓားပြဟာ ရဲစခန်းကို ဘဏ်အမှတ်နဲ့ ၀င်ပြီး ဓါးပြတိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်…. ဓားပြဖြစ်သူဟာ မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ကာ ရဲစခန်းအတွင်းသို့ ခပ်တည်တည် ၀င်လာခဲ့ပြီး အထဲရောက်ချိန် သေနတ်နဲ့ အချိန်ခံရမှ ရဲစခန်းမှန်း သိသွားပါတော့တယ်…. ဓားပြအတွက်ကတော့ တစ်သက်လုံး နောင်တ ရလို့မဆုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်…. အပြည့်အစုံကို …
ကားနဲ့ တိုက်ပြီး သေဆုံးခဲ့သော်လည်း ရုတ်တရက် မက်တက်ရပ် လမ်းလျှောက်ပြီးမှ သေရမည်ကို သတိရပြီး ပြန်လည် လဲကျသွားသည့် ဖြစ်ရပ်ဆန်း
Pop Pin New July 21, 2019
ချစ်ခင်ရတဲ့ စာရှုသူများခင်ဗျာ.. အခုတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ အင်မတန်မှကို ရယ်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းပြီး ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ရုပ်သံဖိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်သံဖိုင်လေးထဲမှာတော့.. လူတစ်ယောက်က ဆိုင်ကယ်နဲ့ လမ်းသွယ်ကနေ လမ်းမပေါ်ကို ဖြတ်ပြီး တက်တဲ့အခါမှာ..လမ်းမက လာတဲ့ ကားနဲ့ ပွတ်တိုက်မိသွားပါတယ်.. တိုက်မိတဲ့ ပုံကလည်း ဆိုင်ကယ်နောက်ပိုင်းကို ပွတ်သလို ဖြစ်သွားတာကြောင့် ဆိုင်ကယ်မောင်းသူက သာမာန် နာကျင်မှုမျိုးပဲ …
သတို့သမီးကို မြင်ရုံနဲ့ လန့်ဖျန့်ပြီး မင်္ဂလာပွဲမှ ထွက်ပြေးကာ မြစ်ထဲခုန်ချခဲ့တဲ့ သတို့သား. . . .
Pop Pin New July 19, 2019
သတို့သမီးကို မြင်ရုံနဲ့ လန့်ဖျန့်ပြီး မင်္ဂလာပွဲမှ ထွက်ပြေးကာ မြစ်ထဲခုန်ချခဲ့တဲ့ သတို့သား. . . . Arranged marriage ဆိုတာ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့ သူနှစ်ယောက်ကို မိဘဆွေမျိုးများက လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို arranged marriage တွေဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာထက် အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ပိုများပါတယ်။ တချို့တစ်လေဆို ကိုယ်နဲ့လက်ထပ်မယ့်လူကို ဖြူသလား မည်းသလားတောင်မသိဘဲ မင်္ဂလာဆောင်ကာမှရုပ်မြင်ဖူးကြတဲ့အထိ …
ထိုင်ခုံနေရာထမပေးလို့ စကတ်လှန်ပြထားတဲ့အမျိုးသမီး (ရုပ်သံ)
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ လိုင်းကားတွေ ရထားတွေစီးတဲ့အခါ ထိုင်ခုံနေရာတစ်နေရာ ရဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ရုံးတက်၊ ရုံးဆင်း လူအသွားအလာများတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် ကားပေါ်မှာ ထိုင်ခုံနေရာရဖို့က မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စာနာနားလည်တတ်တဲ့ ခရီးသည်အချို့ကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ သံဃာ၊ သီလရင်တို့တက်လာရင် သူတို့ရဲ့ ထိုင်ခုံနေရာကို ဖယ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရီးသည်တိုင်းတော့ ဒီလိုစိတ်ထားမျိုး မရှိနိုင်ပါဘူး။ လတ်တလော မော်စကိုနိုင်ငံက …
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာ ယောက်ျားကို တားမရလို့ ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်တဲ့ ဇနီး…
Pop Pin New July 7, 2019
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာ တားမရလို့ ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ ဇနီး ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကို တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် “မရဘူး….ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူး​နဲ့ကို တိုင်မှာ…မိန်းမကလည်းကွာ….ငါက ချစ်လို့စတာကိုလာပါ….ပြန်ရအောင်….” “မပြန်ဘူး….မပြန်ဘူး….ရှင့်ကို တိုင်ကိုတိုင်မှာ…အဲဒါမှ ရှင် နောက်မလုပ်ရဲမှာ ရုံးရှေ့က ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး ထွက်ကြည့်မိတော့ မျိုးချစ်နဲ့ သူ့မိန်းမ …
ကားထဲမှာ စုံတွဲချစ်တင်းနှောနေတာကို မသိဘဲ၊ ကားခိုးဖို့ ကြိုးစားသူ video ( ရုပ်/သံ )
Pop Pin New July 4, 2019
တံခါးကို ဖွင့်ပြီးမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အရာတစ်ခုကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူ တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အမျိုးသားဟာ ဘောင်းဘီကျွတ်လျက် အနေအထားနဲ့ ထွက်လာပါတယ်။ နောက်မှ သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးကိုပါ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူခိုးဟာ လူလစ်ပြီအထင်နဲ့ အပိုင်ဆိုပြီး လုပ်မိကာမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရလို့ အံ့သြမင်တက်နေပါသေးတယ်။ နောက်မှ ဖနောင့်နဲ့တင်ပါး တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ပြေးသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ …
ထိတ်လန့်စရာ လေယာဉ်ပျံပေါ်က ခလုတ် (၄) ခုနဲ့ အမျိုးသမီးအိမ်သာ
အဖြစ်က ဒီလိုဗျ … ကျနော် မလေးရှားကို လေယာဉ်နဲ့သွားတုန်းကအိမ်သာတက်ချင်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ယောကျာ်းလေးအိမ်သာက လူပြည့်နေတာဗျ…..ကျနော် မျက်နှာပျက်နေတာကို လေယာဉ်မယ်လေးက….တွေ့တော့ သနားပြီး အမျိုးသမီးအိမ်သာကို…အသုံးပြုခွင့် ပေးတယ်ဗျ……….””လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင့် တခုတော့ သတိပေးပါရစေ ကိစ္စပြီးလို့ရှိရင် ရေလောင်းပြီးထွက်လာလိုက်ပါတခြားခလုတ်တွေကို ယောင်လို့မနှိပ်မိပါစေနဲ့ရှင်”” …….ကျနော်လဲ အမျိုးသမီးအိမ်သာကဘာတွေ ကွာခြားလို့လဲ တွေးပြီးဘေးဘီဝဲယာကိုကြည့်လိုက်တော့ ခလုတ် ၄ခု တွေ့လိုက်တယ်ဗျာ “WW-WA-PP-ATR” တဲ့ ဒီခလုတ်လေးခုကဘာများလုပ်ဆောင်ပါလိမ့် …
၂၄ နာရီအတွင်း ၄၂ ကြိမ် အာသာဖြေခဲ့မှုကြောင့် ဆယ်ကျော်သက် တစ်ဦး သေဆုံး
Pop Pin New June 26, 2019
၂၄ နာရီအတွင်း ၄၂ ကြိမ် အာသာဖြေခဲ့မှုကြောင့် ဆယ်ကျော်သက် တစ်ဦး သေဆုံး လိင်အာသာဖြေခြင်းဆိုတာ အမျိုးသားများအတွက် ပုံမှန်သဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပျိုဖော်ဝင်ခါစ အမျိုးသားများ ဟိုမုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့် လိင်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာချိန်တွင် ခန္ဓာကိုယ်သွေးသားတောင်းဆိုမှုကြောင့် သုတ်ရည်ထုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်တင်မျှတသော လိင်အာသာဖြေခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပေမယ့် ဒီအလေ့အထကို စွဲလန်းပြီး အလွန်အကျွံပြုလုပ်ရင်တော့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်နော်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံက အသက် ၁၆ …